Vavaka mahery 3 hamerenana ny asanao. ?
3 vavaka mahery mba hampody ny asa. Ny asa dia antony miteraka fiahiahiana foana, na dia ho an'ireo izay very asa tiany indrindra aza. Ny fanontaniana "nefa inona no nataoko diso?" Tsy miampita ny saintsika io ary manontany ny fahaizantsika. Saingy ny marina, matetika ny antony mahatonga ny fialam-boly tsy misy ifandraisany aminao ary tonga noho ny antony tsy voafehinao izany. Sarotra sy sarotra ny scam, raha tiantsika ny hanome hery kely anao hamerenanao ny asanao very. Topazo maso ilay fehezanteny 3 miverina miasa sy manampy anao amin'ny fikatsahanao hiverina amin'ny asanao taloha.
1 3 vavaka mahery mba hampody ny asa
2 Ny vavaka hamerenana ny asa amin'ny fanelanelanana olo-masina maro
3 Ny vavaka hamerenana ny asa miaraka amin'ny fanelanelan'i San Antonio
4 Ny vavaka hamerenana ny asa miaraka amin'ny fanelanelanan'i St.
Jereo ihany koa ny atiny hafa momba ny fiaraha-miory, fombafomba ary vavaka ho an'ny el tontolo asa:
Ny vavaka hamerenana ny asa amin'ny fanelanelanana olo-masina maro
Oh! Ry Reny Malalànay, Andriambavy Aparecida, Ry Masina Rita an'i Cassia, Ry malalako Masindahy Jude Thaddeus, mpiaro ny antony tsy azo atao. Santo Expedito, ilay masin'ny minitra farany ary Masindahy Edwiges, ilay masin'ny mahantra Mpanalalana amin'ny Ray ho ahy (omeo ny anaranao feno) Mangataka aminy aho mba hanampy ahy hiverina amin'ny asako hahafahan'izy ireo miantso ahy indray, maika. Manome voninahitra sy hidera anao lalandava aho hiankohoka eo anatrehanao. Mivavaha: 1 Rainay sy voron-dranomasina 3 Matoky an 'Andriamanitra amin'ny heriko rehetra aho ary mangataka aminy hanazava ny lalako sy ny fiainako, Amena.
Lazao izany ny vavaka mandritra ny 3 andro misesy, raha azo atao miaraka. Fidio koa ny toerana milamina sy milamina izay tsy hanelingelina anao, ahafahanao mifantoka tanteraka amin'ny finiavanao amin'ny fomba tsara sy miaraka amin'ny ny finoana sy ny fahatokiana fa ho tanteraka izany fahasoavana izany.
Ny vavaka hamerenana ny asa miaraka amin'ny fanelanelan'i San Antonio
«Raha mila fahagagana ianao, mankanesa any San Antonio, handositra ny devoly sy ny fakam-panahy avy any amin'ny afobe ianao. Avereno ny very Ny tranomaizina henjana dia tapaka, Ary amin'ny tampon'ny rivo-doza dia avelao ny ranomasina misamboaravoara. Amin'ny alàlan'ny fanelanelanana nataonao Ny loza, ny lesoka, FAHAFATESANA mandositra, Ny malemy lasa matanjaka Ary tonga ny marary salama. Avereno izay very ... (avereno in-3) Ny zava-dratsy rehetra ataon'ny olona Moderate, retreat, Lazao anay izay nahita azy; Ka hoy ny Paduan. Avereno izay very ... (avereno in-3) Voninahitra ho an'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Toy ny tamin'ny voalohany, ankehitriny ary amena hatrany. Avereno izay very… (avereno in-3) V. Mivavaha ho anay ry Masindahy Masina Anthony. A. Enga anie isika ka ho mendrika ny fampanantenan'i Kristy. Avereno izay very… (avereno in-3) Mivavaha amin'ny Rainay sy Arahaba Maria.
Lazao izany vavaka isan'andro na raha ilaina, ary ampirehevo ny labozia isaorana an'i Saint Anthony rehefa vita ny fahasoavana. I Saint Anthony no Saint izay tsy maintsy asainay zavatra very, mba hahafahanao mampiasa an'izany koa ny vavaka ho an'ny fitiavana, tanjona, vola na toe-javatra mila hatsarana.
Ny vavaka hamerenana ny asa miaraka amin'ny fanelanelanan'i St.
"Santo Mandingo i Santo Antonio, hazo Mirongueiro i Santo Onofre. Oh, oh, my saint Cypriot ... Lehilahy mainty mahay mandahatra ody tsara. Ataovy ao anaty fahanginana, miteny kely izy ary adala! ”San Cipriano, misaotra. Ny fahafahako (milaza ny anaranao feno) dia hahazo ilay asa tadiaviko (lazao ny anaran'ny orinasanao) lehibe noho olona firy no hamaky an'ity hafatra ity! Masindahy Sipra, mpamosavy ary Kristiana, marina sy ratsy fanahy, manam-pahalalana ary manjaka amin'ny zava-kanto ara-pivavahany, miantso anao amin'ny foko, vatana, fanahy ary fiainana manontolo aho mba hahatratra ny tanjona hamerenana ity asa ity (lazao ny anaran'ny orinasa). Mangataka amin'ny hery ambony rehetra an'ny Trinite Masina aho, ny herin'ny ranomasina, ny rivotra, ny afo, ny natiora ary izao rehetra izao mba hanao an'io asa io ho eo am-pelatanako ary hamatotra ahy tanteraka (farito ny anaranao feno). Enga anie ity asa ity ao (lazao ny anaran'ny orinasa) ho ahy mandrakizay, fa eo ambanin'ity FAHEFANA MASINA ity asa ity dia tsy an'ny olon-kafa afa-tsy izaho (teneno ny anaranao feno). Avelao ny tompon'andraikitra mandray mpiasa mahita kandidà hafa fa izaho (teneno ny anaranao feno). Raha mbola tsy miantso ahy ny mpitantana fandraisana (lazao ny anaranao feno) hilaza aminao fa ahy ny asa dia tsy ho faly izy ireo ary isaky ny mandre ny anarako izy ireo (teneno ny anaranao feno) dia ho azony antoka fa izaho no olona hifandraisana . ilay asa Osy nahagaga izay nianika ny havoana, ento amiko ilay asa (andao lazaina ny anaran'ny orinasa) ilaiko sy iriko mafy. Eny ary, hatao izy, hatao. Mino aho ary hanana ilay asa tadiaviko avy amiko (omeo ny anaranao feno) mandrakizay ”.
izany mahery ny vavaka ary tokony hatao mandritra izany 3 andro miaraka amin'izay miaraka amin'ny finoana lehibe sy fahatokisana! Manokàna minitra vitsivitsy, mba alaivo an-tsaina ny fiainanao amin'ity zava-misy vaovao ity, amin'ny fahasambarana rehetra izay hitondrana anao any amin'ny asa taloha. Raha tena tapa-kevitra ianao fa ny fiverenana amin'ny asanao taloha no safidy tsara indrindra, jereo ny fombafomba 4 adaladala mba hampody ny asanao ary hanamafy orina kokoa ny fangatahanao.